गृहपृष्ठ » अनौठो संसार » श्रीमतीसँग रिसाएर हिँडेका श्रीमानले जे गरे थाहा पाउँने जो कोही चकित !
काठमाडौं । पति पत्नीको विवादलाई परालको आगो भन्ने गरिन्छ । बल्दा ठूलो बल्छ तर छिट्टै निभ्छ । तर कुनै श्रीमान आफ्नो श्रीमतीसँग रिसायो भने धेरैमा के गर्न सक्छ ?
सामान्यतयाः सम्बन्ध विच्छेद गरेर अलग अलग हुन्छन् । यहाँसम्म कि कतिपयले जीवन पनि समाप्त पार्न सक्छन् । अर्को सरल कुरा के हुन्छ भने लामो समयसम्म श्रीमतीसँग नबोल्ने गर्छन ।
यो भन्दा बाहिर पनि आफ्नो रिसलाई चिसो पार्न व्यक्तिहरू विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्दछन् । यदि कोही शान्त रहन मन पराउँछन् भने, कोही निदाएर क्रोधलाई शान्त पार्छ ।
इटलीका व्यक्तिले पनि आफ्नो रिसलाई शान्त पार्न सरल तरिका अपनाए, तर शान्त बनाउँने रिसाउने यो तरिकाको परिणाम थाहा पाउँदा तपाईं स्तब्ध हुनुहुनेछ ।
वास्तवमा, एक इटालियन मानिस आफ्नी पत्नीसँगको विवादपछि टहल्न बाहिर निस्केका थिए । श्रीमतीसँगको विवादलाई लिएर आगो भएका उनी आफ्नो रिसलाई शान्त पार्न चाहान्थे । तर रिसले सुधार गरेको जस्तो देखिदैन कि उनी ४२० किलोमिटर टाढा पैदल हिडेर जहाँ पुगे त्यसले सबैलाई हैरान बनायो ।
गत महिना, इटालीको कोमोमा एक जोडीबीच कडा लडाई भयो । श्रीमान रिसाएर जान्छन् ताकि उनी आफ्नो रिसलाई शान्त पार्न सकुन् । यसमा अच्चम मान्नुपर्ने केहि छैन ।
धेरै व्यक्तिले रिसाएको समायमा हिंड्न सल्लाह दिन्छन् । पैदल यात्राले क्रोधलाई शान्त पार्छ । यस समाचारमा आश्चर्यजनक कुरा यो हो कि त्यो मानिस यति रिसाएको थियो कि उनले एक हप्ताको लागि पैदल यात्रा गर्न सफल भएका हुन् ।
तपाईंले यसलाई सहि पढ्नुभयो । क्रोधमा ती मानिस घरबाट निस्के र एक हप्ताको लागि हिडेर लगभग ४२० किलोमिटर टाढा आफ्नो घरबाट टाढा पुगेका हुन् ।
यो बीचमा उनलाई गमारा शहरको समुद्र तट नजिकै प्रहरीले पेट्रोलिङ्ग गर्दा ति व्यक्तिलाई देख्यो अनी सोधपुछ गर्यो । तब उनीहरूले थाहा पाए कि रातको २ बजे उक्त व्यक्ति कोमो शहरबाट गिमारा शहरमा हिडेका थिए ।
शहरका सबैले इटालीमा लगाइएको राष्ट्रव्यापी कर्फ्यूलाई कसरी पछ्याइरहेका छन भनेर गस्ती प्रहरीहरू बाहिर निस्केका थिए ।
तब तिनीहरूले एकजनालाई रातको २ बजे सडकमा हिंडिरहेको देखेका थिए । उक्त व्यक्तिलाई सोधपुछ गरेपछि उनलाई प्रहरी चौकी लगिएको थियो जहाँ थाहा पाए कि त्यस व्यक्तिको पत्नीले उनको बेपत्ता भएको बारेमा रिपोर्ट लेखेकी थिइन् ।